NextMapping | Akwụkwọ ndu
Cheryl Cran bụ onye dere akwụkwọ mmepe asaa gụnyere akwụkwọ ọhụrụ ya,OsoteMapping ™ - Na-atụ anya, vnyagharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ Nakwa yana onye kacha ere ya “Nduzi nke Onye ndu mgbanwe - Ngbanwe vinggbanye Inwe Ebuba Puru ike”(Wiley 2015).
E-Akwụkwọ Ọhụụ na akwụkwọ ndị ọzọ na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Ugbu a! Nye iwu ka o youromi gị taa!
OsoteMapi ™: Na-eche, vnyagharịa & Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ
Mbipụta nke abụọ ya na ozi ndị emelitere na akwụkwọ ọrụ ibe dị njikere maka ọnwa nke anọ nke Eprel 4, 2020. versiondị a na-eme ka ndị mmadụ, ndị isi na ndị otu mepụta ọdịnihu ha ma maapụ 'Ihe Na-esote.'
Ọsọ mgbanwe dị okpukpu iri karịa ọsọ ọsọ karịa ka ọ dị afọ iri gara aga na 40% nke Fortune 500 taa agaghị adị n'ime afọ iri na-esote. O di nkpa ka ndi ndu ndi n’achie ihe, ndi otu na ndi n’achu ahia gha acho ime ihe ha ma tinye uzo iji ghaputa odinihu oru ha.
Nduzi nke ndu ndu
Na 'Art nke Change Leadership - Direction Transformation Na A በፍጥነት Paced World,' M na-eje ije ndị na-agụ akwụkwọ site na usoro mmepe mmepe mgbanwe nke otu esi abụ onye ndu mgbanwe na -emepụta nsonaazụ echi taa. Gụnyere otu esi achọpụta ụdị onye ndu mgbanwe gị, yana otu ị ga - esi metụta ma tinye ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị isi mgbanwe.
Barnes na Noble
Anyị nwere onyinye pụrụ iche maka iwu buru ibu ma ọ bụrụ na ị nye iwu nke ego niile dị n'okpuru zitere anyị email na info@nextmapping.com na akaebe nke izu ahia anyị ga-enye gị ego gị!
Xzọ 101 iji mee ka Mbido X, Y na Zoomers nwee obi ụtọ na Ọrụ
Chee afọ nke 2020 Kedu ka azụmahịa ga-adị? Kedụ ka azụmahịa ga-esi agbanwe n'ihi mmetụta ndị ọgbọ? N'ime onye ndụmọdụ akwụkwọ a na onye edemede Cheryl Cran, CSP na-enye ụzọ 101 maka ndị isi na ndị ahịa azụmaahịa iji mee ka ntinye ọrụ na afọ ojuju ọrụ. Nchọpụta e mere gosiri na Gen X na Y dị njikere ịchọ ọrụ n’ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ha enweghị obi ụtọ n’ebe ọrụ. Ọsọ ọsọ na ọgụgụ dị mfe na ọtụtụ ndụmọdụ bara uru.
Ndi isi ochichi ndu n’ime oge dijitalụ: Otu esi eme mgbanwe, gbanwee ndị mmadụ na ito eto
Dị ka onye ndu, mkpa inwekwu nkà na-arịwanye elu. Onye ndu n’ọdịnihu bụ onye ndu na-ejikọ aka na usoro ochie nke inye iwu na njikwa njikwa anaghị egbutu ya ọzọ. Ndi ndu ugbua kwesiri igbanwe ma gbanwee ya na ndi ndu mgbanwe. N'ime akwukwo a, enyere usoro mmepe banyere otu esi eme ka akụkụ nile nke ịbụ onye ndu bawanye gụnyere, usoro nduzi siri ike dị ka nkwukọrịta, njikwa esemokwu, iso ndị otu dịpụrụ adịpụ, ịba ụba nka na ụzụ na ndị ọzọ.